Mampijaly ny fizahan-tany any Mexico amin'ny alàlan'ny fameperana fitsangatsanganana tsy ilaina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana any Mexico » Mampijaly ny fizahan-tany any Mexico amin'ny alàlan'ny fameperana fitsangatsanganana tsy ilaina
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fizahan-tany any Mexico dia maratra noho ny fameperana tsy dia ilaina any Etazonia
Raha mamela ny hiditra ao amin'ny firenena ny Governemanta Meksikana, dia apetrak'i Etazonia ny fameperana ny dia lavitra.
Tsapan'i Mexico ny fahaverezan'ny mpandeha amerikana satria mitohy ny fameperana COVID-19
Tamin'ny taona 2020, nandany vola be indrindra tamin'ny dia lavitra i Etazonia tamin'ny fandaniana antonony isaky ny mponina mitotaly 3,505 $.
Kanada no tsena loharanom-bola fandaniana faharoa avo indrindra ho an'i Mexico miaraka amin'ny $ 1,576 isaky ny mponina.
Kolombia no tsena loharanom-bola fandoavam-bola fahatelo misy $ 1,286 isaky ny mponina.
Fitsangatsanganana an-tany hafa tsy dia ilaina eo anelanelan'i Etazonia sy Mexico voafetra hatrany 17 volana hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19 ary mety hitranga izany fiantraikany manimba ho an'ny Indostrian'ny fizahantany any Mexico.
Ny tatitra farany dia nanambara fa tamin'ny taona 2020, ny US nandany ny be indrindra tamin'ny dia lavitra mivoaka miaraka amin'ny fandaniana antonony isaky ny mponina mitotaly 3,505 $. Kanada no tsena loharanom-bola fandaniana faharoa avo indrindra miaraka amin'ny $ 1,576, arahin'i Kolombia miaraka amin'ny $ 1,286.
Raha mamela ny hiditra ao amin'ny firenena ny Governemanta Meksikana, dia apetrak'i Etazonia ny fameperana ny dia lavitra. Satria i Etazonia no tsena loharanom-bola lafo indrindra ho an'ny mpitsidika, mialoha ny toerana misy ny tsena loharano manan-danja toa an'i Arzantina, Colombia ary UK, ny indostrian'ny fizahan-tany any Mexico dia hahatsapa ny fameperana ny dia tsy ilaina any Etazonia.
Raha ny fanadihadiana natao vao haingana dia vonona ny hanao dia lavitra ny mpandeha, izay azon'i Mexico ianteherana. Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa tamin'ireo 1,442 mpiorina manerantany dia nilaza ny 37% fa vonona ny hanao dia iraisam-pirenena mankany amin'ny kaontinanta hafa izy ireo. Ao anatin'ny fotoana fohy, ny indostrian'ny fizahan-tany meksikana dia mety ho afaka hiankina amin'ny tsenan'ny fialantsasatra maharitra, mikendry ireo mpamonjy voan'ny areti-mandringana mitady 'lisitry ny siny', dia aorian'ny COVID-19.
Saingy, ny indostrian'ny fizahantany dia mety mbola miady mafy hanonerana ny fahaverezan'ny mpandeha amerikana mandany vola be. Tamin'ny taona 2020, ny 83% n'ny olona tonga rehetra tany Mexico dia avy tany Etazonia, nampiseho ny fiankinan'ny firenena amin'ny tsena ivelany any Etazonia.
Na eo aza ny fameperana ankehitriny, i Mexico dia mety hiaina fitsangatsanganana amin'ny fitsidihan'ny namana sy ny havany (VFR) avy any Etazonia rehefa avela tanteraka, satria io no antony lehibe manosika ny dia eo amin'ny firenena roa tonta. Na izany aza, ny mpandeha dia mety miaina fiakarana amin'ny saran-dalan'ny rivotra noho ny fitomboan'ny fangatahana tampoka. Na izany aza, ny faniriana hahita olon-tiana aorian'izay dia hampirisika ny mpandeha handoa ireo sarany lafo ireo, ka mahazo tombony amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
The Rights and Obligations of a Child in Camp Novambra 30, 2021